Ihowuliseleli Foot Valve X9121 uMvelisi kunye noMboneleli | Xushi
IValve yeBhola yoManyano
IVenkile yeeNyawo X9121
Itephu yePlastiki X8411
Compact Ball Valve X9002
Bubbler stake black X6101
Itephu yomatshini wokuhlamba weplastiki enekhonkco X8022
I-Digital Temperature Regulator
I-valve yeenyawo ixhotyiswe ngee-inlets zamanzi ezininzi kwi-valve ye-valve kwaye ixhotyiswe ngesikrini ukunciphisa ukungena kwe-debris kunye nokunciphisa amathuba okuvala i-valve yonyawo. Nangona i-valve yeenyawo ixhotyiswe ngesikrini esichasene ne-clogging, i-valve yeenyawo ngokuqhelekileyo ifanelekile ukucoca imidiya, kwaye i-valve yeenyawo ayifanelekanga kwimidiya kunye ne-viscosity eninzi kunye neengqungquthela.
Ivalve yonyawo luhlobo lwevalve eyonga amandla, ethi ifakwe ngokubanzi kwisiphelo sonyawo lombhobho wokufunxa ophantsi kwamanzi wempompo yamanzi ukunqanda ulwelo olukumbhobho wempompo yamanzi ukuba ungabuyeli kumthombo wamanzi, udlala umsebenzi we engena kodwa engaphumi.
FOB Ixabiso: US $0.5 - 9,999 / Iqhekeza
Min.Ubungakanani boMyalelo: I-100 iqhekeza / amaqhekeza
Ubunakho bokubonelela: 10000 Iqhekeza/Amaqhekeza ngenyanga
INTO ICANDELO IMATERIAL QUANTITY
1 I-NUT YENZIWE NGENTSIMBI ESHAYINAYO 8
2 IGASKET YENZIWE NGENTSIMBI ESHAYINAYO 8
3 UMZIMBA U-PVC 1
4 IBHAYIBHILE U-PVC 1
6 IGASKET EPDM · NBR · FPM 1
7 UMZIMBA U-PVC 1
8 ISIKRHULU YENZIWE NGENTSIMBI ESHAYINAYO 8
9 IBONNET U-PVC 1
INGCACISO: IValve yonyawo (Ikhatriji yodidi lweBaffle)
SIZE NPT BSPT BS ANSI I-DIN I-JIS
Ingcamango yevalve yonyawo
Ivalve yonyawo ikwabizwa ngokuba yivalve yokukhangela. Yivalve ecaba ephantsi koxinzelelo. Umsebenzi wayo kukuqinisekisa ukuhamba kwendlela enye yolwelo kumbhobho wokufunxa kwaye wenze impompo isebenze ngokuqhelekileyo. Xa impompo iyeka ukusebenza ngexesha elifutshane ixesha elifutshane, ulwelo alukwazi ukubuyela kwitanki yomthombo wamanzi ukuqinisekisa ukuba umbhobho wokufunxa uzaliswe ngolwelo ukuququzelela ukuqala kwempompo.
Ivalve yonyawo yahlulahlulwe yaba: iveluve yeenyawo zentwasahlobo, ivalve yonyawo lwempompo, ivalve yonyawo lwempompo yamanzi:
I-valve yeenyawo ixhotyiswe ngee-inlets zamanzi ezininzi kwi-valve ye-valve kwaye ixhotyiswe ngesikrini ukunciphisa ukungena kwe-debris kunye nokunciphisa amathuba okuvala i-valve yonyawo. Nangona iunyawo ivalve ixhotyiswe ngesikrini esichasayo, i-valve yeenyawo ifanelekile ngokubanzi ukucoca imidiya, kwaye i-valve yeenyawo ayifanelekanga kwimidiya ene-viscosity eninzi kunye namasuntswana.
Ngaphambili: Jonga iValve X9501
Okulandelayo: Unyawo lweValve X9101
Impompo yonyawo lweValve
Ivalufa yeeNyawo zaseNtwasahlobo
I-Valve yeMpu yeMpompo yamanzi
Unyawo lweValve X9101
Ivelufa yonyawo X9111
I-Sci-Tech Industrial Park, iCandelo leQinggang, iYuhuan, iZhejiang, eTshayina